संविधानसभा : जन्म देखि मृत्यु सम्मको स्वेत कहानी - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
काठमाडौ । नेपाली राजनितिमा क्षण क्षणमै सोच्नै नसकिने गरी घटना घटिरहेका छन् । गठबन्धन निर्माण ,पार्टी एकता,पार्टी टुक्रिने ,पार्टी प्रवेश गर्ने जस्ता घटना हुँदै आए,हुँदै छन् र हुने पनि छन् । अनेक बाहानामा नेपाली राजनिति अस्थिर बन्दै आएको छ । अव देशले आगामी मंसिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभाले स्थायी कर्मचारी पाएपछि स्थिर सरकारको कल्पना गर्दैछन् ,नेपाली जनता । यो भन्दा अगाडिका घटनालाई फर्केर हेदा लोकतन्त्र ,गणतन्त्र आयो भन्ने मात्र सुनेका जनता महसुश गर्नमा सधैं चुकिरहे । राजतन्त्र ढलेदेखि यता के के भयो ? र भोली के होला ?
संक्रमणकालीन समयमा बनेका १० सरकार
१ पुष्पकमल दाहालको मन्त्रिपरिषद् गठन २०६५–०५–२०
२ माधव कुमार नेपालको मन्त्रिपरिषद् गठन २०६६–०२–११
३ झलनाथ खनालको मन्त्रिपरिषद् गठन २०६७ माघ २३
४ डा. बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषद् गठन २०६८ भदौ १२
५ बाबुराम भट्टराई सरकार २०६९ जेठ
६ खिलराज रेग्मीको अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्
७ सुशील कोइराला सरकार गठन २०७० माघ २९ गते
८ केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन मिति २०७२–०६–२५
९ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड (दोस्रोपटक) सरकारमा, गठन २०७३ साउन २०
१० शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिमण्डल २०७४ साल जेठ २३
हलो जोत्नेले जहाज उडाए
लोकतन्त्र स्थापनाका नाममा माओवादीले राज्य निरंकुशतालाई हटाउँदै हिजो १० वर्षे जनयुद्ध गरे । लोकतन्त्र त आयो जनताका लागि हैन राजनिति गर्नेका लागि मात्र । सुरुमा जनताले पनि निकै आश गरे अव त नेपालमा के के पो हुन्छ ।
साधारण हलो जोत्नेले पनि जहाज उडाएको भान गराउने नेपाली राजनितिक दलका नेताका भाषण अझै टुङ्गिएका छैनन् । आखिर राजनिति भनेका देश चलाउन गरिने लिडरको भुमिका न हो । कुर्शी छोप्ने झिनो आडले बनेका अनगिन्ति पार्टीले के लिडिङ् गर्ने हुन् ? अहिले राजनितिका काचा समाचार सुनेर गाउँ गाउँका रेडियो र शहरका टेलिभिजन सुन्न र हेर्न मन पराउँदैनन्,नेपाली जनता । दिनभरी काम नगरी खान नपग्ने नेपालीले खाईमारा राजनितिको के आशा गर्थे र ? गुन्डागर्दी ,बल प्रयोग, भ्रष्टाचार र पैसाको आडमा पेलिने साधारणलाई खान लाउन पुगाउनु बाहेक सरकारबाट आशा नै छैन ।
६ वर्षका टुहुरा बने नेपाली जनता संविधान नपाएर
राजनितिक दलले मञ्चमा भाषण ठोके ताली पिटे जनताले ,भोट देउ भन्दै घर आँगन पुगे भोट पनि दिए । भुठा आश्वासन सुन्दै ,मान्दै संविधानका लागि नेपाली जनता ६ वर्षसम्म टुहुरा बनेँ । जब २०७२ आसोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भयो ,त्यसताका पहाडमा दिप र तराई अदिप देखियो । संविधान त पाए तर विरोधाभास । हिजो अस्ति तराईमा ठेलाठेल भयो । तराई सम्बद्ध दलका सांसदले विदा हुँदाहुँदै आफैले लेखेको संविधान अपुर्ण भने । संविधान भनेकै अनुसार अपुर्ण नभएपनि उनीहरुको मुद्दा समेटिएको देखिएन ।
खाएर हात धोए जस्तो : गठबन्धन निर्माण,पार्टी एकता,तालमेल र धुर्बीकरण
सबैभन्दा हाँस्यास्पद कुरा यहीँनेर लाग्छ ,पार्टीहरु कहिले कसरी फुट्छन् ,कसरी जुट्छन् र के हुन्छ नेपाली रानितिमा भन्ने कुरा । राति एक समाचार सुनोर सुत्यो भोली बिहानै अर्कै समाचार सुन्नपर्छ । कसैले नपत्याउने कुराहरु भए जो ऐतिहासिक हुने छन् । अरु कुरा छोडौं तिन प्रमुख दलहरुको प्रेम कथा जस्तो घतलाग्दो कुरा यहाँ देखियो । तत्कालिन नेकपा एमालेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जब राजिनामा भए तब कांग्रेसका खुट्टा समात्दै माओवादी केन्द्र पनि सरकारमा सहभागि भयो एक घनघोर षड्यन्त्र रचेर । त्यतिखेर नेकपा माओवादीमाथि कांग्रेसले खुट्टा टेकेर एमालेलाई घेराबन्दी गर्ने योजना रच्यो । एकपछि अर्को हुँदै कांग्रेस माओवादी केन्द्रले सरकार चलाए । स्थानिय तहको निर्वाचनमा अधिक जित्ने आश दुवै पार्टीको थियो तर नतिजा आयो अर्कै दुई चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भईसक्दा जनता एमालेृको पक्षमा देखिए । माआवादी केन्द्र र कांग्रेसको योजनामा अंकुस लाग्यो ।
सबैभन्दा घाटा त माओवादी केन्द्रले बेहार्यो कारण कांग्रेसले माओवादी केन्द्रलाई प्रयोग गरेको खुल्यो ,माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड जेलमा परेको भालुझैं रन्थनिए । त्यसपछि तेस्रो चरण सम्पन्न हुने वित्तिकै एमाले प्र्रयोग गर्ने प्रचण्डको मुख्य रणनिति बन्यो । त्यसपछि राष्ट्रिय सभागृहमा सुर्यकै चिन्हकै प्रयोग गर्न चाहने माओवादी केन्द्र र नयाँशक्ति हामी कम्युनिष्ट पार्टी हौं भनेर हात मिलाएर जिब्रो उचाल्न सफल भए । यो कुरा प्रधानमन्त्री देउवा अर्थात कांग्रेसको टाउको दुखाईको विषय बन्यो । देउवाले त प्रचण्डलाई यतिसम्म सोचे की हिजो मेरै आँगनमा सुरक्षार्थ खटिएको कुकुर आज अर्कैको आँगनमा भुक्दैछ । त्यसपछि देउवा अत्तालिए चारैतिर फोनका घण्टी बजाए मधेसवादी दल तथा लोकतान्त्रिक शक्ति एकै ठाउँमा राखी लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउने हल्ला चल्यो । गठबन्धनभित्र पनि धेरै कुरा मिलेनन्, कति सिट कसले कहाँबाट पाउने भन्ने कुरा गठबन्धनभित्र टाउको दुखाई बन्यो । आफुले सुर्य चिन्हबाट लड्ने योजना बनाएका नयाँ शक्ति संयोजक बाबुराम सिट र स्थानकै भागबन्डा नमिल्दा वाम गठबन्धनबाट बाहिरिए । यता कांग्रेसले सबै लोकतान्त्रिक शक्ति गठबन्धनमा समेट्न सकेन तथावी बिजय गच्छदार नेतृत्वको लोकतान्त्रिक फोरमको एक हिस्सा कांग्रेसभित्र बिलिन भयो र दुई राप्रपा र राप्रपा प्रजातान्त्रिक कांग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा छिरे ।
धोका दिएका प्रचण्डको बाटो हेर्दैनन्, प्रधानमन्त्री देउवा
वाम गठबन्धनपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच सम्बन्ध बिग्रिएको छ । केही दिन प्रचण्ड र देउवाविच निकै घनिष्ठ सम्बन्ध रह्यो । स्थानिय तहका तिनै चरणपनि तालमेल गरेरै सम्पन्न गरे तर तालमेल गर्दा पनि दुवै दलको सोचे अनुरुप नतिजा देखा परेन । एमाले घेर्ने माओवादी केन्द्र र कांग्रेस भित्र ठुलो प्रेसर बस्यो । प्रचण्ड आगामी चुनाव लक्षित भएर स्थानिय तहको निर्वाचनमा पहिलो बनेको एमालेका सुर्यमा नजिक भए । त्सपछि देउवाले गठबन्धन प्रस्ताव अनुसार राप्रपा र राप्रपा प्रजातान्त्रिक सरकारमा सहभागि गराए । यो विषय माओवादी केन्द्रलाई टाउको दुखाई बन्यो ।कारण माओवादी केन्द्र सरकारमा सामेल भएपनि विना विभागिय पदमा भयो ।
माओवादी सरकारबाट बाहिरन सक्ने सम्भावना
बामगठबन्धन बनेपछि काँग्रेसभित्र निकै ठूलो तरंग आएको छ । शुरुमै मैले प्रधानमन्त्रीलाई भनेको थिए, सरकार छाड्ने भएपनि हामी तयार छौँ । उहाँले पर्दैन पर्देन भन्नुभयो । अहिले माओवादीले नैतिकताका आधारमा सरकार छाड्नुपर्छ भन्ने मिडियामा हल्ला आएको छ । माओवादी केन्द्रक अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारमा बस्ने कि छाड्ने भन्ने विषयमा आफुले आज निर्णय लिन सक्ने बताएका छन् । पार्टी निकट विद्यार्थी संगठनको पदाधिकारी वैठकलाई सम्बोधन गर्दे प्रचण्डले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेपछि सरकारको वारेमा निर्णय हुने बताएका हुन् । अध्यक्ष प्रचण्डले भने ,”हामी त नैतिकताका आधारमा सरकारमा बसेको हो । किनभने चुनाव गराउने बेलासम्म सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने र मन्त्री फिर्ता नहुँने भनेका थियौँ । तर, अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले राप्रपालाई सरकारमा ल्याएपछि माओवादीले छाडिदिए हुन्थ्यो भन्ने आशय राखेजस्तो पाएको छु । उहाँले चाहेको के हो ? उहाँको कुरा के हो ? म आज उहाँलाई भेट्दै छु । उहाँसँग भेटेर उहाँको कुरा बुझेपछि सरकारबारे निर्णय गर्छौँ । हाम्रो लागि सरकार मुख्य कुरा होइन । हाम्रो मुख्य ध्यान चुनाव हो । चुनाव तोकिएको मितिमा हुने सुनिश्चता भएपछि सरकारको विषय ठूलो हुँदैन । ”
प्रचण्डको यो भनाईले यदि प्रधानमन्त्रीले सरकारबाट बाहिरन आग्रह गरे माओवादी सरकारबाट बाहिरन सक्ने सम्भावना देखाएको छ । यद्यपी आज प्रधानमन्त्री र प्रचण्डवीच हुने भेटमा यसवारे महत्वपूर्ण छलफल हुन सक्छ ।
जनता के चाहन्छन ?
नेपाली राजनितिमा पहिले नै हुनुपर्ने यस्तो गठबन्धन र पार्टी एकीकरण अहिले आएर भएको छ । अव जनताले देशलाई सही दिशामा डोर्याउने सरकार चाहेका छन् । अव पहिलो हुने पार्टीकै कुर्सी स्थायी हुनेछ । आगामी मंसीरमा हुन लागेको प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा जित्नेकै हातमा देश हुने हुँदा यसमा राजनितिक शक्ति अझै जालबाजी गर्ने सक्ने खतरा टरेको छैन । देशलाई अस्थिरताबाट स्थिरता तर्फ अवको पार्टी को होला ? समयले बताउने छ ।